पहिलो अन्तरिक्षयात्रीकाे निधन
काठमाडाै । चन्द्रमामा पहिलाे पटक पाइला राखेका र अन्तरिक्ष कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री जन योङ्गको निधन भएको छ। हालसम्मै सार्वाधिक समय अन्तरिक्षयात्रीका रुपमा काम गरेका उनक ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएकाे हाे । उनि पहलाे अन्तरिक्ष कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति थिए । पहिलाे पटक अन्तरीक्षमा पाइला टेकेका याेङ्गले ६ पटक अन्तरिक्षको भ्रमण गरेका थिए। सन् १९३० मा सान फ्रान्सिस्कोमा जन्मिएका योङ्गले जोर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एइरोनोटिकल इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेका थिए र त्यसपछि अमेरिकी नौसेनामा परीक्षण पाइलटका रुपमा काम गरेका थिए।
सन् १९६२ मा नासामा अन्तरिक्षयात्रीको जागिर शुरू गरेका उनी सबैभन्दा पहिले सन् १९६५ मा ‘जेमीनी थ्री’ मिशन अन्तर्गत अन्तरिक्षमा गएका थिए। पृथ्वीको परिक्रममा गरिरहँदा उनले लुकाएर पुर्‍याएको स्यान्डवीच आफ्ना सहकर्मी गुस ग्रिसस्मलाई दिएका थिए।नासाले उक्त कदमका लागि उनको आलोचना गरेको थियो।
सन् १९६९ को मे महिनामा चन्द्रमाका लागि उडेको अन्तरिक्ष तयारी मिशन ‘एपोलो टेन’मा पनि उनी सहभागी थिए। पहिलाे पटक उनले एपाेलाे र जेमिनिसहितका अन्तरिक्ष अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए। सन् १९६९ को मे महिनामा चन्द्रमाका लागि उडेको अन्तरिक्ष तयारी मिशन ‘एपोलो टेन’मा पनि उनी सहभागी थिए। त्यस्तै सन् २००४ मा अवकाश लिनुअघि योङ्गले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा ४२ वर्ष काम गरेका थिए।
नासाका अनुसार निमोनियाँसँग सम्बन्धित समस्याबाट शुकवार बिहान उनको मृत्यु भएको हो । नासाले विश्वले एक जना अग्रणी व्यक्ति गुमाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
प्रकाशित : आइतबार, पुष २३, २०७४१२:१३
सराङकोटबाट उडेको प्याराग्लाईडिङ भित्र एक्कासी चिल पसेपछि…
अविरल वर्षाका कारण तीन सातादेखि अन्धकारमा !
वाइडबडी खरिद प्रकरण : कांग्रेस सांसद केसीको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन !
३३७ ट्याक्सीलाई कारबाही, ट्याक्सी चालकलाई नियन्त्रणमा